I-star wars Umbutho ufika ekugcineni futhi ufundwe futhi uqoqwe | Izincwadi Zamanje
I-star wars UMbutho ufika ekugcineni futhi nawo ufundwe uqoqwe
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | inganekwane yesayensi, Amabhuku
Kusuka eqoqweni lami lezincwadi I-star wars o I-star wars. Futhi iphosta yokuqala yokukhangisa kusuka ngo-1977.
Ifilimu lesithathu le-trilogy yesithathu ye- I-Star Wars: Ukuphakama kweSkywalker. the Amandla osiphelezele Iminyaka engama-42 iyaphela (noma cha, ukuthi ngale movie ngeke wazi). Futhi abanye bethu baneminyaka yobudala sikhule nge-trilogy yokuqala futhi sikubonile nokuvuka kwe into eyimfihlakalo yalesi saga esiyingqayizivele emlandweni wokuzijabulisa kweCINEMA ngamagama amakhulu.
Ngakho-ke sibonile nokwakhe ukuziphendukela kwemvelo nokuguqulwa ngezindlela eziningi. Yebo, uMbutho ibuye ifundwe futhi ifundwe. Yilokho 3 kwezihloko ezingapheli lokho okushicilelwe mayelana ne-Star Wars nokuthi ngiyigugu njengegolide endwangwini, yize okubaluleke kakhulu yiphosta.
1 Izimpi zezinkanyezi nami
2 IGreat Book of the Galaxy - uPablo Hidalgo noDavid Reynolds
3 I-Star Wars - Ukwakhiwa kwe-trilogy yasekuqaleni - uFco. Javier Martínez García
4 I-Star Wars eyenziwe eSpain - Umlando we-Star Wars eSpain uMqulu II - uJosé Gracia Pont
Izimpi zezinkanyezi nami
Yize kimi bekulokhu kunjalo I-star wars, Ngeke ngingene kwimfashini nasezingadini ezinama-anglicized, ngakho-ke ngiya odakeni. Ngoba mina nomfowethu siyiJedi (yebo, yebo ngizo: kubizwa ngokuthi 'Jedi', the jedai sikushiya kumaSaxon) kusukela esibelethweni cishe yena, ngaphezu kwami, ukuthi bengivele ngiphulukisa ama-joule ayi-7 ngenkathi ngindiza okokuqala IMillenium Falcon. Ngakho UHan Solo (ozohlala ephila njalo), Chewie, Luke Skywalker, Princess Leia, Darth Vader, Master Yoda kanye no-Emperor Palpatine owesabekayo bangamaqhawe namaqhawe ethu. Lezo ngemuva kwalokho nazo, kunjalo, lapho zihlala khona lapho, kepha azifani.
Amahlaya, ama-paperbacks nokunye okwengeziwe kudlule ezandleni zethu cishe I-star wars. Uhlangothi Olumnyama nalo lusikhohlisile, njengawo wonke umuntu, kepha uMbutho ubelokhu enamandla kakhulu futhi asizange sigcine ngokunqotshwa. Futhi manje, izizukulwane zethu ezintsha zamaPadawa zisendleleni efanele. Eminyakeni edlule nabangane abahle bebelokhu bewa ezinye izincwadi noma ama-encyclopedia afana nalawa, ukwazi ngokuphelele KONKE mayelana nalesi saga esizidlulisile uqobo nomlando we-cinema.
Incwadi enkulu yomthala - UPablo Hidalgo noDavid Reynolds
Este ivolumu ephelele futhi enkulu (Ngiyafakazela) kuthunyelwe ku- 2018 Kuyinto a isihloko senkomba nencwadi ephelele yokungena ngokugcwele kulowo mthala, kude kakhulu. Lokhu kugcwele imininingwane, inezithombe ezingaphezu kwe-1500 zekhwalithi ephezulu, futhi isitshela konke mayelana nabo bonke abalingiswa, abakhulu nabesibili, ngaphezu kwezinye izidalwa, izimoto, izikhali, izesekeli nobuchwepheshe.
I-Star Wars - Ukwenza kwe-Original Trilogy - Fco. UJavier Martínez García
I-saga yefilimu enjengale, ebhekwa njengebaluleke kakhulu emlandweni, yayinesiqalo. Futhi, njengoba kuvame ukwenzeka, lezo zimiso zazinzima. Le ncwadi iletha umfundi enhliziyweni yendaba ngemuva kokwenza lawo ma-movie okuqala futhi ikwenza lokho ngokuhlukanisa phakathi kwenganekwane neqiniso.
Ngakho-ke siyazi ukuthi yiziphi izisusa ezenziwa ngemuva kombono kaGeorge Lucas, ukuthi imibhalo yakhe yabhalwa kanjani noma ukuthuthukiswa kwayo yonke uchungechunge lwamasu amasha we-cinematographic. Futhi-ke, ama-anecdotes y curiosities ngokudutshulwa okuhlukahlukene.
I-Star Wars eyenziwe eSpain - Umlando we-Star Wars eSpain uMqulu II - uJosé Gracia Pont
Ngesihlokwana se- Isikhathi sokuguquka nokuzalwa kabusha -1987 kuya ku-1996-, amakhasi angama-279 akha le ncwadi awaka ephelele futhi enemininingwane umhlahlandlela wokubuka wakho konke okungatholakala ezweni lakithi kuleyo minyaka. Ngaphezu kwalokho, iqoqa amakhasi we izinhlu okwangempela, izikhangiso emaphephandabeni, amamodeli ukukala, izinhlelo zokuqala zevidiyo, Izimpi Zenkanyezi XXX, imidlalo yebhodi, imidlalo yevidiyo, nomagazini nakho konke abalandeli ababenakho ezandleni zabo ukuqoqa.
Ukuba ivolumu yesibili, kusebenza ukubeka bonke labo balandeli endaweni yabo efanele kanye nesikhathi somlando lapho ubudlelwano babo baqala khona hhayi njengomlandeli kuphela, kepha njengochwepheshe I-star wars. Ilungele lokho kubuyekezwa okungokomlando, kodwa futhi ngawe njengomlandeli, manje ebizwa nangokuthi yi-geek, ukuthi sesibe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » izinhlobo » inganekwane yesayensi » I-star wars. I-Force ifika ekupheleni futhi nayo iyafundwa futhi iqoqwe
UJane Austen. Imishwana nezingcezu zomsebenzi wakhe ngosuku lwakhe lokuzalwa olungu-244